Amadivayisi we-Auto Belay Wokukhuphuka Nokuzijabulisa | Izinhlelo Zokukhuphuka Eziphelele Eziphelele
IDUPLEX SPRING DESIGN
Ukudonswa kabusha okungafuneki kwenzelwe ukuthembeka
Thola othengisa umkhiqizo okwesibili
Umsubathi wePD® uSean McColl wabelana ngendaba yakhe yama-Olimpiki
Ukuzuza izinga eliphakeme kakhulu le- ukuhlolwa nokuqinisekiswa
Hlangana nomlingani wakho omusha okhuphukayo
IPerfect Descent Auto Belays yakhiwe ngesandla e-USA futhi yaqinisekiswa ezingeni eliphakeme kakhulu emhlabeni. Kufaka ikesi langaphandle le-aluminium nensimbi engagqwali ukuvikela ukucacisa izingxenye zangaphakathi ezigqoke kahle. Ukwakhiwa okulula nokuhlanganisiwe, ukwethembeka, kanye nezindleko eziphansi zobunikazi kungezinye zezizathu ezimbalwa zokuthi kungani iPD® iyindawo ekhethiwe yokuzilolonga ezindaweni zokuzivocavoca, ezinkambeni, ezikoleni nasemanyuvesi, ezifundweni ze-ninja, nasezikhungweni zokuzijabulisa zomndeni. Kuhlolwe futhi kwaqinisekiswa ku-10x EN 341: 2011 Class A., ezimele izidingo zesitifiketi eziphelele kakhulu zamadivayisi wokuzithokozisa we-auto belay.
EQINILE futhi ETHEMBEKILE
Ihlolwe ku-10x EN 341: 2011 Class A futhi ifaka i-aluminium eqinile kanye nensimbi engagqwali ngaphandle enezinto ezinemba kahle ngaphakathi.
I-DUPLEX SPRING ™
Ukuhlehlisa okungafuneki okubandakanya i-Duplex Spring Design ™ ekhethekile ye-PD® eyenzelwe ukuthembeka nokuphila isikhathi eside.
Kulula ukukhweza, ukuhambisa, nokuphatha ekuphakameni futhi kungabizi kakhulu ukuthumela ngomsebenzi nokwenziwa kabusha.
IZINDLEKO EZINCANE ZOBUNINI
Intengo yezinga lokungena, imali ephansi yokuphindaphinda yokuphinda ufake imali, akukho zinkokhiso zensizakalo ezifihliwe, nezakhi ezihlala isikhathi eside ezisho ukonga imali yabaninizo impilo yonke.
Kusetshenziswa amaqembu nabasubathi abaphezulu emhlabeni wonke kanye ne-auto belay yokuqala esetshenziswe emncintiswaneni weNdebe Yomhlaba, okuholele entuthukweni ebonakalayo ekuphepheni komncintiswano nasekungakhethi.
UKUSETSHENZISWA KWANGAPHAKATHI NOKUSETSHENZISWA KWANGAPHANDLE
Izingxenye ezingamelana nokugqwala nezindlu ezivalekile zokwenza okuvelele ngaphakathi nangaphandle.
Ukwakha i-auto belay ehamba phambili
Khetha ukusebenza kwakho
IDrayivu Eqondile ™
Umholi wentengo kuma-belays wekhwalithi ephezulu nokusebenza okuphezulu.
Ihlehla ngesilinganiso esimaphakathi se-2ft (61cm) ngomzuzwana, ikwenze kube inketho efanelekile yokukhuphuka okujwayelekile, imizila yokufudumala, iziteshi zokukhuphuka kwezingane, nokukhuphuka komcimbi.
Iqukethe i-Duplex Spring Design ™ yethu ekhethekile yokwethembeka nokuphila isikhathi eside.
Ivalwe ngokuphelele ukusetshenziswa kwasendlini nangaphandle.
Ijubane leDrayivu ™
I-auto belay yasekuqaleni ebuyisa ngokushesha ibeka indinganiso yekhwalithi nokusebenza.
Ihlehlisa emuva ngombani nge-15ft (4.6m) ngomzuzwana, i-Speed ​​Drive ™ ilungele ukukhuphuka kwejubane nokuncintisana, imizila enamandla, ukuqeqeshwa kwesikhawu, nemizila yokuqina kanye namasekethe.
I-Official Auto Belay ye-IFSC World Cup Climbing futhi iqukethe iDuplex Spring Design yethu ekhethekile.
Khetha imisila yenkomo yakho
I-PD® Auto Belays inikela ngobude bemisipha emithathu obenzelwe ukuthuthukisa ukusebenza kwe-auto belay yakho ngokususelwe ekuphakameni okunyukayo. Ngaso sonke isikhathi khetha imisila yenkomo ehambelana kakhulu nobude obuklelwayo obuhlosiwe ngokulingana noma ngobude obukhulu.
Ukuphakama ukuphakama phakathi kwe-18ft no-28.5ft (5.5m no-8.7m)
Ukuphakama ukuphakama phakathi kwe-26ft no-40.5ft (8m no-12.3m)
Ukuphakama ukuphakama phakathi kwe-34ft no-53.5ft (10.4m no-16.3m)
Khetha ukuthi Uxhuma Kanjani
Ingxubevange yensimbi, i-carabiner yokuzikhiya okuzenzakalelayo esiteji esine-swivel edidiyelwe
I-aluminium Anodized, i-carabiner yokukhiya okuzenzakalelayo esiteji esine-swivel edidiyelwe
Ama-carabiners amabili, ama-3-isigaba sokukhiya okuzenzakalelayo ngamathambo enja athungiwe kanye ne-swivel edidiyelwe
Amandla agcwele athungwe iluphu afanele ukusetshenziswa nezinhlobo zokuxhuma ezigunyaziwe
Ikhwalithi Yezinkanyezi Ezinhlanu
Kuthandwa ngabasubathi abangochwepheshe, abanikazi, kanye nabaqwala imithambo
Umkhiqizo omuhle iqembu lokusekela elingcono
Umkhiqizo omuhle kakhulu nethimba lokusekela elingcono “I-Perfect Descent auto belays ihlangabezana njalo nezidingo zami futhi nabasebenzi be-Arial Adventure bebelusizo futhi benolwazi njalo lapho ngidinga ukuxhaswa kwamakhasimende.” UNowa B. ngomhlaka 19 Aug 2020
UNowa B. ngo-Aug 19, 2020
Ukwehla okuphelele kuzokwenza ukwehla kwakho kuphelele
Ikhwalithi ephezulu kakhulu ye-Autobelay Iyatholakala. Ncoma kakhulu.
UMike L. ngoMeyi 9, 2019
I-auto belay 2.0
Lokhu yi-auto belay yekusasa. Siyawuthanda umkhiqizo.
UKellen D. ngoJuni 19th, 2019
Ukusetshenziswa okuhle kwanoma yikuphi ukukhuphuka kwezemidlalo!
Idivayisi emangalisayo nokusetshenziswa okubushelelezi.
UMaurice D. ngoMeyi 6, 2020
Le auto belay eyodonga lwezinyawo ezingama-22 futhi isebenza kahle. Angisadingi umuntu ongangibhedela! Kuzizwa kuphephe kakhulu futhi kunokwethenjelwa futhi kwakulula ukusetha ngezinhloso zami. Ngithenge owesi-2 ngenye ingxenye yodonga lwami!
USteve W. ngoJanuwari 28, 2020
I-Master Your Auto Belay Management Program
Ukubhaliswa Komkhiqizo kuyingxenye ebalulekile yokuphathwa kwe-auto belay futhi kusungula irekhodi langaphambi kwesikhathi nelinembile elisetshenziswe kuyo yonke impilo yenkonzo yethuluzi. Iba ngowokuqala ukuthola i-beta ebucayi mayelana nokuvuselelwa komkhiqizo, izindaba nemicimbi, ama-bulletin ezobuchwepheshe, nokunikezwa okukhethekile.
Finyelela uhla lwethu olugcwele lwemikhiqizo yezincwadi zesiNgisi neyangaphandle. Landa imibhalo yamanje kakhulu yemodeli 220 kanye ne-230 belays auto, ukuhlolwa kwe-duplex spring ™ kanye nemanyuwali yokufaka umsila wenkomo, imihlahlandlela yokuhlanza nokubulala amagciwane, nokuningi.
Thola okuningi ohlelweni lwakho lokuphatha lwe-PD® ngolwazi olufushane nolunzulu mayelana nokufakwa, ukunakekelwa nokusebenza. Hlola amasu ajwayelekile wokuxazulula inkinga, funda ngezidingo zokuhlolwa komkhiqizi, bese uthola imihlahlandlela yokuphatha amabhande wemoto wokuncintisana.
Amazinga we-EN abeka umgoqo wokuphepha komkhiqizo, ukwethembeka nekhwalithi. IPerfect Descent Auto Belays ihlolwe yaqinisekiswa ezingeni eliphakeme kakhulu lezinsimbi zokuzithokozisa ezingo-10x EN 341: 2011 Class A. Buka bese ulanda iSitifiketi Sokuvumelana Nesokuhlola esikhona manje.